သခင်ဖြစ်သူ အမွေးတွေရိတ်ပေးပြီးနောက် သူ့ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့6fat packs ကြောင့် ရုတ်တရက် နာမည်ကြီးသွားတဲ့ ကြောင်လေး - Mckzone Daily
သခင်ဖြစ်သူ အမွေးတွေရိတ်ပေးပြီးနောက် သူ့ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့6fat packs ကြောင့် ရုတ်တရက် နာမည်ကြီးသွားတဲ့ ကြောင်လေး
မကြာသေးမီက အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အမွေးညှပ်ခြင်း လမ်းကြောင်းဟာ ရေပန်းစားလာခဲ့ပါတယ် ။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များကို အေးမြမှုကို ကူညီပြီး အရေပြားရောဂါများကာကွယ်တားဆီးဖို့ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုတခါမှာနွေရာသီတွင် ရာသီဥတုပူပြင်းသောကြောင့် အိမ်မွေးကြောင်လေးကို ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန်အတွက် သခင်က သူ့ရဲ့သားမွေးကိုဖြတ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ။ ရုတ်တရက် အမွေးတွေကို ချွတ်ပြီးနောက် ကြောင်လေးရဲ့ အသွင်အပြင်ကြောင့် လူတိုင်း ရယ်မောသွားကြပါတယ် ။ ဖုံးရန်အမွေးမရှိတော့ဘဲ၊ အထူးသဖြင့် လဲလျောင်းနေတဲ့အခါမှာ ကြောင်လေးရဲ့ ဗိုက်တွင်လည်း “6 fat packs” ကိုတွေ့ရပါတယ် ။
အဆိုပါ ကြောင်လေးဟာ အခြားသူများအတွက် လူရွှင်တော်တစ်ယောက်လို့ပင် ခံစားရပြီး သူ့မျက်နှာမှာ အလွန်မကျေမနပ်ဖြစ်နေကာ မျက်လုံးများ ကျဉ်းမြောင်းလာပြီး “မင်းဘာရယ်တာလဲ? 6-pack ချောမောတာကို တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးဘူးလား” ဆိုတဲ့ အနေအထားနဲ့ ကြောင်ပုံစံလေးက လူတိုင်းကို ရယ်မောစေခဲ့ပါတယ် ။
မကွာသေးမီက အိမျမှေးတိရိစ်ဆာနျအမှေးညှပျခွငျး လမျးကွောငျးဟာ ရပေနျးစားလာခဲ့ပါတယျ ။ အဓိကရညျရှယျခကျြမှာ အိမျမှေးတိရိစ်ဆာနျမြားကို အေးမွမှုကို ကူညီပွီး အရပွေားရောဂါမြားကာကှယျတားဆီးဖို့ ဖွဈပါတယျ ။ အခုတခါမှာနှရောသီတှငျ ရာသီဥတုပူပွငျးသောကွောငျ့ အိမျမှေးကွောငျလေးကို ပိုမိုသကျတောငျ့သကျသာဖွဈစရေနျအတှကျ သခငျက သူ့ရဲ့သားမှေးကိုဖွတျရနျ ဆုံးဖွတျခဲ့ပါတယျ ။ ရုတျတရကျ အမှေးတှကေို ခြှတျပွီးနောကျ ကွောငျလေးရဲ့ အသှငျအပွငျကွောငျ့ လူတိုငျး ရယျမောသှားကွပါတယျ ။ ဖုံးရနျအမှေးမရှိတော့ဘဲ၊ အထူးသဖွငျ့ လဲလြောငျးနတေဲ့အခါမှာ ကွောငျလေးရဲ့ ဗိုကျတှငျလညျး “6 fat packs” ကိုတှရေ့ပါတယျ ။
အဆိုပါ ကွောငျလေးဟာ အခွားသူမြားအတှကျ လူရှငျတျောတဈယောကျလို့ပငျ ခံစားရပွီး သူ့မကျြနှာမှာ အလှနျမကမြေနပျဖွဈနကော မကျြလုံးမြား ကဉျြးမွောငျးလာပွီး “မငျးဘာရယျတာလဲ? 6-pack ခြောမောတာကို တဈခါမှ မတှဖေူ့းဘူးလား” ဆိုတဲ့ အနအေထားနဲ့ ကွောငျပုံစံလေးက လူတိုငျးကို ရယျမောစခေဲ့ပါတယျ ။
Be the first to comment on "သခင်ဖြစ်သူ အမွေးတွေရိတ်ပေးပြီးနောက် သူ့ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့6fat packs ကြောင့် ရုတ်တရက် နာမည်ကြီးသွားတဲ့ ကြောင်လေး"